သင်ဟာတစ်ဦးကနယူး Trader တွင် Are IG ပလက်ဖောင်း? အပြီးအစီးကိုဖတ်ပါ IG ပလက်ဖောင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
[column md =” ၄″]
[ခလုတ်စာသား = "ယခု IG.com သို့သွားပါ" link = "link" target = "_ blank" bg_color = "# FACD48″ bg_color_hvr =" # FACD48″ border_radius = "" border_width = "" border_color = "" border_color_hvr = "" icon = "arrow-circle-o-right" font_color = "# ffffff" font_color_hvr = "" size = "large" align = "center" btn_width = "normal" inline = "no" margin = ""] [/ button] အထွေထွေအန္တရာယ်သတိပေးချက်! ပျံ့နှံ့ခြင်းလောင်းကစားခြင်းနှင့် CFD များသည်ရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများဖြစ်ပြီးသြဇာကြောင့်ပိုက်ဆံလျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ ဤပံ့ပိုးသူနှင့် CFD များအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သောအခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ငွေများဆုံးရှုံးကြသည်။ CFDs များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ပြီးသင်၏ငွေဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကိုသင်တတ်နိုင်သလားစဉ်းစားသင့်သည်။ [/ ကော်လံ]
IG ပလက်ဖောင်းဝန်ကြီးချုပ်ပျံ့နှံ့လောင်းကစားနှင့်ကမ္ဘာအတွက် CFD ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကကပိုင်ဆိုင်ရဲ့ဗြိတိန်အတွက် 1974 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး IG Group မှ။ မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းပေမယ့်ဘဏ်, IG အဖွဲ့အပေါ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း။ ပလက်ဖောင်းကုန်သည်များက CFDs စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးမားဆုံးကစားသမားတဦးတည်းလုပ် 15000 ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်ကျော်မှ access ကိုပေးသည်။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ကဒီ CFD ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းမှုမပြုလုပ်သင့်အဘို့ကောငျးသလဲ
တစ်ခုဖွင့်လှစ် IG ကုန်သွယ်အကောင့်
အကောင့်သစ်ဖွင့်ဖို့ IG.com က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရယူသုံးခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။
သင်ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်ခြင်း IG အကောင့်သိုက်
IG မိုဘိုင်း app များ
IG စျေးကွက် mt4
IG စျေးကွက် L2 ရောင်းဝယ်ရေး
IG စျေးကွက် CFDs
IG သုတေသန tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်
Market က Screener
Thomson Reuters ရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှု
ဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်အခြားသုတေသန tools များ
IG စျေးကွက် cons
ဤ IG ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်သင်ဤပွဲစားနှင့်အတူပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုပေးသွားမှာပါ
IG သူတို့ကကမ္ဘာအနှံ့ကနေကုန်သည်များအားပူဇော်ရသော CFDs အတွက်အထူးပြုသည်။ ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမမီဖို့, ဒီပွဲစားရဲ့အခွဲများတိကျတဲ့နယ်မြေများအတွက်တာဝန်ရှိသည်အာဏာပိုင်များအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။
[icon name =” check-circle” class =”” unprefixed_class =””] ဘဏ္Financialာရေးဆိုင်ရာအပြုအမူအာဏာပိုင်ကို IG စျေးကွက်ကန့်သတ်။
[icon name =” check-circle” class =”” unprefixed_class =””] FCA ၏စည်းမျဉ်းသည်ဥရောပနိုင်ငံအများစုရှိကုန်သည်များကို GBP 50000 အထိအကာအကွယ်ပေးသည်။
[icon name =” check-circle” class =”” unprefixed_class =””] ဆွစ်ဘဏ္Financialာရေးစျေးကွက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့သည်ဆွစ်ကုန်သည်များအား CHF100000 ညှိနှိုင်းမှုကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။
[icon name = "check-circle" class = "" unprefixed_class = ""] ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းညှိသည် IG Group မှလက်အောက်ခံ IG ဘဏ်လုပ် SA ။
[icon name =” check-circle” class =”” unprefixed_class =””] ကုမ္ပဏီ၏လက်အောက်ခံ IG အာရှ Pty Limited ကစင်္ကာပူကုန်သည်များရန်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်စင်္ကာပူ၏ငွေကြေးအာဏာပိုင်များကထုတ်ပြန်ချမှတ်သည်။
[icon name =“ check-circle” class =”” unprefixed_class =””] ဂျပန်တွင်ကုန်သည်များသည် CFDs များကို IG ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင်များကထုတ်ပြန်ချမှတ်သော Securities မှ Limited တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
[icon name = "check- စက်ဝိုင်း" class = "" unprefixed_class = ""] အဆိုပါ IG အုပ်စုတစုလက်အောက်ခံမြောက်အမေရိကအနကျအဓိပ်ပါယျချိန်း, Inc မှအမေရိကန်ကုန်သည်များမှ CFDs ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် CFTC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
[icon name = "check- စက်ဝိုင်း" class = "" unprefixed_class = ""] အဆိုပါ IG စျေးကွက်များတောင်အာဖရိကလီမိတက်အာဖရိကကုန်သည်များမှ CFDs ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
[icon name = "check-circle" class = "" unprefixed_class = ""] IG ကန့်သတ်ယူအေအီးအတွက်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင်များကထုတ်ပြန်ချမှတ်သောလက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။
ထိန်းညှိသောအခြားအလောင်းများကို IG ASIC (သြစတြေးလျ), IIROC (ကနေဒါ), SFC (စင်္ကာပူ), CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) နှင့် FMA (နယူးဇီလန်) တို့ပါဝင်သည်။
ဒါဟာဥရောပနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်မှသာကုန်သည်များသင့်လျော်ကြေးမဆိုပုံစံကနေအကြိုးပွုနိုငျကွောငျးကိုသတိပြုရကျိုးနပ်မယ့် IG Group မှပြိုကျ။
များစွာသောထိပ်တန်းပွဲစားများလိုပဲ, IG ပလက်ဖောင်းသင်သည်လုံခြုံစွာသင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲအသုံးပွုနိုငျသောသရုပ်ပြအကောင့်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ IG သရုပ်ပြအကောင့်လည်းနောက်ဆုံးတွင်အမှန်တကယ်ငွေသားအကောင့်ကို အသုံးပြု. ရှေ့တော်၌ထိုပလက်ဖောင်းထွက်ကြိုးစားရန်လွယ်ကူစေသည်။
သငျသညျတခုဖွင့်လှစ်လိုပါက IG အစစ်အမှန်ကုန်သွယ်အကောင့်, ပြဇာတ်သို့ရောက်ကြောင်းသုံးအချက်များ။ ပထမဦးစွာသင်ထောက်ခံနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုအတွက်နေထိုင်ရပေမည်။ ဒုတိယအချက်, သင်သည်သင်၏နဦးအပ်ငွေအဘို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 300 ၏နိမ့်ဆုံးရှိရမည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်ဖွင့်ချင်တဲ့အကောင့်အမျိုးအစားလည်းအဆုံးအဖြတ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တနည်းအားဖြင့်သင်သည်သူတို့၏မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းကိုရယူနိုငျသညျ, IG Android နှင့် iOS သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ desktop app အတွက်စျေးကွက်တင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖြည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့တွင်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သင်၏အကောင့်ဖွင့်ရန်စကားဝှက်တစ်ခုပါဝင်သည်။ IG ထို့နောက်သင့်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
ဤတွင်, သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓာတ်ပုံများပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, သင့်အစိုးရ၏2ဓါတ်ပုံ ID သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးနှင့်ဘဏ်ကြေညာချက်တစ်ခု utility ကိုဥပဒေကြမ်း၏ 1 မိတ္တူ။ ဒါဟာသင်အတည်ပြုဖြစ်စဉ်ကိုပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်ရင်တောင်သင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည်ကိုသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဘဏ်လွှဲပြောင်း: ဒီနည်းလမ်းကိုမဆိုအခကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်ပေမယ်3စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းအထိကြာမထားဘူး။ အဆိုပါဘဏ်အကောင့်အမည်ကို
သင်သည်သင်၏ဖွင့်ဖို့အသုံးပြုကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်သင့် IG အကောင့်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်: ဤငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များတစ်ဦး 1.5% ကြေးဆွဲဆောင်နှငျ့သငျ $ 300 ၏နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့သတိပြုရကျိုးနပ်မယ့် IG အချို့သောကုန်သည်များအနေဖြင့်ကတ်များငြင်းပယ်လိမ့်မယ်။
PayPal: PayPal သိုက်များသည် ၁.၅% ကြေးနှင့်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၃၀၀ ကိုဆွဲဆောင်သည်။ သင့်ထံမှထုတ်ယူခြင်း IG အကောင့်သင်သည်သင်၏ထံမှအမြတ်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် IG အကောင့်ဘဏ်ငွေလွှဲဖြစ်စေမှတဆင့်သို့မဟုတ်သင့်ဒက်ဘစ် / ခရက်ဒစ်ကဒ်ရန်။
ဘဏ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းသည်အလုပ်ချိန် (၃) ရက်အထိရှိပြီး GBP (၁၅) ဖြစ်ပါသည်။ ယူကေကုန်သည်များသည်သင်၏ငွေစာရင်းသို့ရောက်ရှိရန်ငွေအတွက်သုံးရက်စောင့်ရန်မလိုပါ။ Credit / debit ကဒ်ထုတ်ယူခြင်းသည်လုပ်ငန်းခွင်သုံးရက်အထိကြာမြင့်မည်။
သို့သျောလညျးသငျသညျထုတ်ယူနိုင်ပါသည်နိမ့်ဆုံးပမာဏကို GBP 150 ဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း IG web browser ကို, မိုဘိုင်း, iOS နဲ့ Android app နဲ့ desktop ပေါ်က app ကိုကနေတဆင့်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ထိုအသီးအသီးအမှာအမြန်ကြည့်။
ဒါကသူတို့ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်အားလုံးသည်စတင်ရန်သင်၏ login အသေးစိတ်ကိုထည့်သွင်းဖြစ်ပါသည် IG ပလက်ဖောင်း။ ကို default layout ကိုအဖြူရောင်နောက်ခံဆန့်ကျင်သတ်မှတ်ထား2ပြတင်းပေါက်ပါဝင်ပါသည်။ သငျသညျအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါ module တွေထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ပြတင်းပေါက်အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင် interface ကိုစိတ်ကြိုက်ရပါလိမ့်မယ်။
သို့သျောလညျးသငျသညျတိုက်ရိုက်စျေးကွက်စျေးနှုန်းများဖော်ပြပေးသောမည်သည့်အမြင်အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အလွယ်တကူဖွင့်လှစ်ဇယားနိုင်ပါတယ်။ IG ထို့အပြင်လျင်မြန်စွာဇယားများကိုဖွင့်ရန်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများကိုလည်းပေးထားသည်။ ဝက်ဘ်ပလက်ဖောင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအညွှန်းကိန်း ၂၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုအတွင်းမှညာခလုပ်နှိပ်ခြင်းသည်မတူညီသောရွေးချယ်စရာများရှိသည့် drop-down menu ကိုဖော်ပြသည်။
ဤရွေ့ကားကို Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးစလုံးကို powered device များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီ app အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများ, features တွေနဲ့ဇယားနှင့်တကွကြွလာ။ သင်တစ်ဦးဇယားအတွင်းမှဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုအသာပုတ်အခါညွှန်းကိန်းများနှင့် tools တွေကိုအလိုအလျှောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ တဦးတည်းအေးမြအင်္ဂါရပ်ညွှန်းကိန်းအလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးဇယားမှ add မဆိုညွှန်ပြချက်အလိုအလျှောက်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သင်အချိန်ချွေတာသင်၏နောက်ရဲ့ login ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ်တိုင်သင်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုညွှန်းကိန်းကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ထဲမှာရရှိနိုင်ပါကအခြား features တွေ IG မိုဘိုင်း app တိုင်းကိရိယာများအတွက် AutoChartist, စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်, သတိပေးချက်များနှင့်အသေးစိတ်စျေးကွက်သုတေသနပါဝင်သည်။
2013 ခုနှစ်, IG သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ MetaTrader4 software ကိုပေါင်းစည်း။ ဒါဟာ web-based နှင့်၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင် IG ပလက်ဖောင်း။ အဆိုပါ mt4 software ကိုမြောက်မြားစွာကိရိယာများ, အညွှန်းကိန်းများနှင့်ဇယားပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစတစ်ပြိုင်နက်အများအပြားအရောင်းအဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ခြေရာခံဖို့လွယ်ကူစေသည်။ အခြားရရှိနိုင်ပလက်ဖောင်းကျော် MetaTrader4 ရှိပါတယ်တစ်ခုမှာအဓိကအားသာချက်သင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်နေလုပ်နေသည့်အခါနေရာလေးကိုအတွက်လာပေးသော Excel ကို plugins ကိုအတူပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် IG ရဲ့ထုံးစံကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အပေါ်ကုန်သွယ်မှုကသင်သည် GBP 1000 ၏နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီပလက်ဖောင်းအဆင့်မြင့်ရှယ်ယာကုန်သည်များအဘို့အကြံပြုသည်။ ဒါဟာအစ Thomson Reuters ရဲ့သတင်းကို streaming service ကိုမှန့်အသတ် access ကိုအတူကုန်သည်များပေးပါသည်။ IG ပလက်ဖောင်းမှာလည်းရှောင်ကွင်းရန်သင့်အားခွင့်ပြု IG နှင့်စျေးကွက်သို့တိုက်ရိုက် access ကိုရဖို့။
ဒီပလက်ဖောင်း mt4 နှင့် IG ရဲ့စီးပွားဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုကိရိယာများနှင့်အညွှန်းကိန်းပါရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုသုံးပြီးကုန်သည်ကြီးများ 100 ကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်းကျော်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော်ဤအခွင့်ထူးတစ်လလျှင် GPB 30 တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်မှာပါရှိပါတယ်။ သငျသညျကိုအနည်းဆုံး4ကြိမ်တစ်လကုန်သွယ်မှုလျှင်ဒီကြေးပြန်အမ်းသည်။
ဤသည်နည်းပညာပိုင်းတစ်ပလက်ဖောင်းပေမယ့်တစ်ဦးမဟုတျပါဘူး IG သငျသညျစျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ IG ထောက်ပံ့
သငျသညျကုန်သွယ်အလိုအလျောက်ကြောင်း algorithms တပ်ဆင်နိုင်သည်ဘယ်မှာ Virtual Private Server ကိုနှင့်အတူသငျသညျ။ ဤဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်, သငျသညျ GPB 5000 တစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်ရှိရမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တစ်လလျှင် GPB 50 ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
IG 15000 ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းကိုဖြတ်ပြီးပျံ့နှံ့4ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ (CFDs, equity, cryptocurrencies နှင့်စမတ်တွင်လည်း) ကျော်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဤတွင်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဘာမှာအမြန်ကြည့်ပါတယ်။
IG ရဲ့ CFDs Equity, Forex, ရွေးချယ်မှုများ, cryptocurrencies, ညွှန်းကိန်း, အနာဂတ်, ကုန်စည်နှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုအနှံ့ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်။ CFDs နိုင်ငံအများစုအတွက်နေထိုင်ကုန်သည်များမှရရှိနိုင်ပါသည် IG ပလက်ဖောင်းရန်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤသည် IG ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ဤရွေ့ကားကုန်သည်များကအလိုအလျှောက်စီမံခန့်ခွဲတန်ဖိုးနည်းတွင်လည်းအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ရှိရာ robo-အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ထုတ်ပေး ETF တွင်လည်းဖြစ်ကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကုန်သည်ကြီးများ IG စမတ်တွင်လည်းအဆိုပါ ETF တန်ဖိုးကိုတစ်ရာခိုင်နှုန်း (ပုံမှန်အား 0.20%% 0.23 မှ) နှင့်တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တွက်ချက်သောပိုင်ဆိုင်မှုအခကြေးငွေ '' တစ်ဦးစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်စွဲချက်တင်နေကြသည်။
IG ဒါ့အပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံကုန်သည်များမှအစုရှယ်ယာပေးထားပါတယ်။ အစုရှယ်ယာအတွက်ထရေးဒင်းတစ် 0.1% ကော်မရှင်သို့မဟုတ် EUR 10 ၏နိမ့်ဆုံးကိုဆွဲဆောင်။
သင်အပေါ်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်သည်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို IG ပလက်ဖောင်း 90 ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအားလုံးနှင့်လဲလှယ်-ကုန်သွယ်အာမခံကျော်ပါဝင်သည်။
ယှဉ်ပြိုင်ပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, IG သငျသညျအသေး volumes ကိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေ, အထူးသဖြင့်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားအခကြေးငွေအားသွင်းပေးပါတယ်။ တရားစွဲဆိုအဆိုပါဝန်ဆောင်ခသည်သင်တို့ထံကအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေဘယ်မှာသင်၌အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
အခကြေးငွေအလွှာ (၃) ခုရှိသည်။ CFDsA အစုရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်အခကြေးငွေခွဲဝေခြင်းမရှိသည့် CFDsA ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်အတွက်ပြန့်ပွားမှုတွင်ပါ ၀ င်သောအခကြေးငွေများမဆိုမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆိုမ ၀ ယ်ခင်မည်သည့်အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များကို ဦး စွာနားလည်ရန်အကြံပြုသည်။ IG ငွေပေးငွေယူနှုန်းနုတ်ပါလိမ့်မယ်။
နေ့ချင်းညချင်းကျင်းပရာထူးများအတွက်, IG အဆိုပါလျှောက်ထား interbank မှုနှုန်းကျော်တစ်ဦး 2.5% အခကြေးငွေအားသွင်းပေးပါတယ်။ Mini နဲ့မိုက်ခရိုကန်ထရိုက်အတွက်လျှောက်ထား interbank မှုနှုန်းကျော်တစ်ဦး 3% အခကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
အခွားသောအဖိုးအခ IG ၀ န်ဆောင်ခတွင် ၀ င်ငွေ ၀.၃% ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေလွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် GBP 0.3 ငွေထုတ်ခများပါဝင်သည်။ သို့သော်သင်၏အကောင့်သည်အချိန်အတန်ကြာမလှုပ်မရှားဖြစ်နေလျှင်ကော။ IG မည်သည့်အကောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်အားသွင်းမထားဘူး။
"BCFD provider က"
သို့သော်သူတို့ 12 နှစ်အတွင်းအဘို့မလှုပ်မရှားကျန်ကြွင်းသောအကောင့်တစ်လလျှင်ပေါင်2အားသွင်းပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်ပွဲစားဈေးကွက်ထဲမှာသုတေသန tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်၏အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုသည်ယနေ့တဦးပါတယ်။
ဒီ tool ကသငျသညျတစ်နေရာတည်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီ tool ကိုသုံးပြီးသင်တွေ့နိုင်ပါသည်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏တချို့ကဇယားညွှန်းကိန်းများအတွက်ပုံစံများ, စတော့ရှယ်ယာများအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအချက်အလက်များနှင့်, client ကိုစိတ်ဓါတ်များနှင့်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုပါဝင်သည်။
အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပို့ချတဲ့အခါဒီ tool ကိုအသုံးအတွက်လာပါတယ်။ ဒါဟာသင်လက်ရှိမှပထမဦးဆုံးလက် access ကိုပေးသည်နှင့်
ဒီ tool ကဝဘ်ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်သာသုံးစွဲနိုင်သည်။ ဒါဟာသင်တိကျတဲ့အခြေခံအချက်များအပေါ် အခြေခံ. စတော့ရှယ်ယာအဘို့သင့်ရှာဖွေရေးဆင်းကျဉ်းမြောင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, 500000% အထက် GBP 1 နှင့်မြတ်များမှုနှုန်းကျော်တစ်ဦးကစျေးကွက်ဦးထုပ်နှင့်အတူဗြိတိန်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထိတ်။
ဒီ tool ကရှယ်ယာကုန်သည်များများအတွက်နေရာလေးကိုလာနှင့်ဝဘ် platform ပေါ်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တူရိယာတစ်ခုဇယားတိကျတဲ့ဖွင့်အခါတိုင်းအပြင်, ပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာသတင်းကိုအလိုအလျောက်ပြသပါလိမ့်မည်။
IG ထို့အပြင်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုမှတ်စုရေးဖို့ဖွတဲ့ကုန်သွယ်ဒိုင်ယာရီ feature ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ IG အကယ်ဒမီလည်းပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အောင်မြင်စွာကုန်သွယ်မှုဖို့ဘယ်လိုပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
IG ထောက်ခံမှုအီးမေးလ်, chat နဲ့ဖုန်းကိုမှတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုဖြတ်ပြီးလာကုန်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတော်များများဟာအားလုံးလိုင်းများမှတဆင့်ပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်မှုကြိမ်ချီးကျူးသည်။ သို့သော်ရှိခဲ့ IG အထောက်အပံ့န်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုရောင်းဖို့ကြိုးစားနေနည်းနည်းတွန်းအားပေးကြောင်းစျေးကွက်တိုင်ကြားမှုများ။
ကုန်သွယ်လွယ်ကူအောင်ကြောင်းသုတေသန tools တွေကိုကောင်းကောင်းစုဆောင်းမှု
Web ကိုပလက်ဖောင်းကို manual စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ပါတယ်
IG ပွဲတစ်ပွဲအကြီးမားဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ် CFD ပွဲစားများ ကမ်ဘာပျေါတှငျယနေ့။ ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးကရှေ့ဆောင်, IG5တိုက်ကြီးအနှံ့ဖောက်သည်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါဝင်ရောက်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် IG ကို web နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများအပါအဝင်ပလက်ဖောင်း။
အဆိုပါပွဲစားလည်းကွဲပြားခြားနားသောကုန်သည်ဦးစားပေးဖြည့်ဆည်းဖို့ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။ အများအပြားယှဉ်ပြိုင် CFD ပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် IG ရဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်အဖိုးအခနည်းနည်းပိုမြင့်ဖြစ်ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ကယှဉ်ပြိုင်မှုန့်, ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေနှင့်ကော်မရှင်များပူဇော်လုပ်ပါ။
IG ပလက်ဖောင်းဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအတော်လေးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏သုတေသနအရင်းအမြစ်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကြားအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။ မျှော်လင့်, ဒီ IG သူတို့နှင့်အတူကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်လှစ်သည့်အခါပြန်လည်သုံးသပ်သင်အသုံးပြုရန်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များပေးထားတယျ။
Tags: binary options များကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ, CFDs, IG အကောင့်သိုက်, ig ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်, ig Forex ပြန်လည်သုံးသပ်, ig အညွှန်းကိန်းရှယ်ယာစျေးနှုန်း, ig စျေးကွက် binary options ကိုပြန်လည်သုံးသပ်, ig စျေးကွက်ပွဲစားများပြန်လည်သုံးသပ်, IG ပလက်ဖောင်း, ig ပလက်ဖောင်းပြန်လည်သုံးသပ်, ig ပြန်လည်သုံးသပ်, ig စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်, IG ကုန်သွယ်အကောင့်, IG ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, IG ဝဘ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း
ငါကဒီဂျစ်တယ်ခြေသလုံးလေးပါ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကုန်သွယ်နေတယ်။ ငါ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာကုန်သွယ်မှုပြုသူကိုစတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ မှာအချိန်ပြည့်ဖြစ်လာတယ်။ နှစ်တွေကုန်သွယ်ရေးစတော့အိတ်များ၊ Forex၊ ဒီဂျစ်တယ်ရွေးစရာ CFD နှင့် Cryptocurrency တို့ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယအနေဖြင့် Investingstockonline ကိုပွဲစားလုပ်ငန်းတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ရေး site ကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။
1Market ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2021 သို့လင့်ထားသည်
1Market ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2021
အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုသည်မကြုံစဖူးမြန်ဆန်စွာဖြင့်ကြီးထွားနေသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားအမြတ်အစွန်းများများပေးသော Forex trading ၏အလားအလာသည်လူများစွာကိုအွန်လိုင်းဘဏ္financialာရေးနေရာတွင်ပါဝင်ရန်အားပေးသည်။ ဒါကြောင့် ...
လင့်ခ် Binomo အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းနောက်ဆုံးသတင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 2020
ပွဲစားတစ် ဦး သည်တရားဝင်မှုရှိ၊ မရှိနှင့်မဆုံးဖြတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည့်အဓိကအချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအခွင့်အာဏာတစ်ခုမှအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ Binomo > ဆက်ဖတ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်
# 1 ကုန်သွယ်အချက်ပြခြင်း၏စိတ်ကူးကိုနားလည်ရန်လမ်းညွှန်
ကုန်သွယ်မှုအစုစုကိုကွဲပြားစေရန်ထိပ်တန်းလှည့်ကွက် ၅ ခု
ETF ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသူတို့ဆွဲဆောင်ရတာလဲ
အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏နောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဦး တည်ရာအဖြစ်ဂျပန်ကိုရွေးချယ်သင့်တယ်။
သင်စျေးကွက်တွင်ရှင်သန်နိုင်ရန်ကူညီရန်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုလှည့်ကွက် ၇ ခု
အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်တိရိစ္ဆာန်များမှသင်အဘယ်အရာသင်ယူရမည်နည်း
© 2021 အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစတော့ရှယ်ယာမူပိုင်ခွင့်